Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Mafambiro akareba kupfuura ose epasi pano akareba kwazvo! nzendo izvi zvinogona kutora mazuva anoverengeka uye kufukidza zviuru zvemakiromita. saka, heano nzendo kuti kutora wakarebesa mu Europe, Asia, Ositireriya, uye US. Chinyorwa ichi chakanyorerwa kudzidzisa…
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Kune akawanda modes pakufamba iripo nhasi chevatariri kumativi Europe, asi chitima kufamba maringe ndege pakufamba ndiye anofadza kupfuura imwe. zvisinei, iyo nzira yokufambisa zvakanaka? At Save A Train, tiri Chokwadi vakarerekera uye kufunga kuti chitima kufamba ari by…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Bernina Express ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dzechitima nzendo munyika. Kutanga kwazvose, PaRauma Line kubva kuDombas kuenda kuAndalsnes (Noweyi), unogona kunakidzwa maonero pamatunhu nenhongonya. Uyezve, iwe unogona kuona materu emakomo uye mabani paunopfuura paRauma…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Kana tichironga zororo kuti mhuri, nemudzimai kana boka shamwari, zviri nyore kuti munhu wose anobvumirana. Chimwe chinhu ichava nyore kubvumirana, zvisinei, ndechokuti kurenda motokari kana kuenda nechitima. Heino chikonzero nei chitima kugumburwa iri…